Izimpawu zomuntu - I-World March
Ikhaya » Izimpawu zomuntu
Kusuka ku-IES punta Larga yaseSanta Cruz de Tenerife, basithumela
Izithombe ezivela kumjikelezo wesi-2 Wokufundisa Nokwezenhlalo Yezemidlalo, imodyuli ye-ATL
Sithumela kuwe i-video yesibonakaliso somuntu sokungabi nabulungiswa okwenziwa abafundi nothisha balesi sikhungo ngo-Septhemba 26 odlule.
Abafundi bezikhungo ze-El Casar
Abafundi be-IES Campiña Alta no-IES uJuán García Valdemora
Ngesikhathi soSuku Lomhlaba Wonke Lokungabi Nodlame nokuqala kwe-2nd World March, abafundi abangama-200 Alumni we-IES Campiña Alta no-IES Juán García Valdemora, kanye nabantu abadala base-50 base-El Casar benza uphawu lomuntu lokungabi nabudlova.
IES MiraCamp, i-Vila-real
Ku-IES MiraCamp basitshela ukuthi:
Sichaze kabanzi ngesihloko somkhankaso wakho, "Izimpawu Zabantu Zokuthula Nokungabi Nodlame".
Sibona ukuthi isiphakamiso sakho sithakazelisa kakhulu, yingakho sikuthumela umsebenzi wethu nabafundi.
I-IES Antonio Machado, Umugqa
Kusuka ku-IES Antonio Machado thumela leli qembu lezithombe zendlela ababumba ngayo Symbol Yokuthula Komuntu.
ILiceo Rosales, eMadrid
Ukusuka eRosales High School eMadrid, basithumela lolu phawu oluhle lomuntu lokuthula.
Izimpawu Zomuntu nephepha Lokuthula
Umsebenzi we- “HUMAN SYMBOLS AND SABANA DE LA PAZ” wenzelwe abafundi bezikole zamabanga aphakeme kanye nabamabanga aphansi abavela esikoleni i “Villa Maria Cano” edolobheni laseMosquera Cundinamarca (eColombia).
Kwenziwa ezenzakalweni zokuzithokozisa ukuqwashisa umphakathi ngezinkinga zokuthula nokungabi nodlame nokwazisa uMhlaba Wesibili Wokuthula Nokungabi Nodlame.
Isikhungo semfundo eTamil Nadu
Isikhungo semfundo e Tamil Nadu (India)
I-30 yango-Agasti ye-2019, iSymbula Yokuthula etholakala Kwezikhungo Zemfundo eTamil Nadu (India).
I-Gamo Diana School
Kusuka eGamo Diana School - eMadrid
Ngosuku lokuthula nokungahambisani nobudlova 2019, nginamathisela uphawu olwenziwe ngoJanuwari wokugcina 30 phakathi kwami.
Kusuka ku-ICIP Cardinal Herrera Oria weMadrid, ngosuku lwe-Peace and Nonviolence 2019, sidlulisa lo mlayezo omuhle
Kakhulu uMnu noNkk.
Okokuqala, ngiyabonga ngalo msebenzi omuhle.
Izolo besigubhe uSuku Lokuthula esikoleni. Izinga ngalinye lenza uchungechunge lombala othile ngomyalezo wokuthula nothando. Egcekeni wonke amaketanga ayexhunyiwe futhi sakha umbuthano onesiqubulo esithi "Uma siba namandla ngokwengeziwe lapho sikhona".
Imiyalezo yokuthula yafundwa, kuphambene nodlame lwanoma uluphi uhlobo futhi sahlabelela iculo.
Sithumela isithombe ngexhaxha lothando lwesikole esifuna ukudlulisela emhlabeni wonke.
Ngaphandle kokunye, thola ukubingelela ngomusa.